रेल, मेट्रोरेल र पानी जहाज चल्दैमा देश धनी र जनता सुखी हुदैनन् - रेल, मेट्रोरेल र पानी जहाज चल्दैमा देश धनी र जनता सुखी हुदैनन्
रेल, मेट्रोरेल र पानी जहाज चल्दैमा देश धनी र जनता सुखी हुदैनन्
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २२ असार, 07:29:21 PM
देश विकासको बहस माटो र सडकको विकासमा हुनुपर्ने ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमा सिमित छ । यसले पनि हाम्रो वास्तविक धरातल के हो भन्ने छर्लंग पार्छ । अहिले झन पुर्ववती सरकारका निर्णय खारेज गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहादुर पात्र बनेका छन् । जनतालाई खाने पानी र बस्ने बास नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रेल र पानी जहाजको उखान टुक्का हाल्नै भ्याई नभ्याई छ । पाँच बर्षे स्थायी सरकारबाट देश विकासको अपेच्छा राखेका नागरिक नेताहरुका विकासे गफ सुनेर दिक्क भएका छन् । प्राकृतिक श्रोत साधनको धनी देशमा खानी, नदी, पानी, विजुली आदी पर्याप्त भएपनि यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधन र त्यसको प्रयोग नभइरहेका बेला सरकारका विकासे गफबाट विज्ञहरुको धारणा कस्तो छ भनेर हामीले धातु विशेषज्ञ कमल मानन्धर सँग कुराकानी गरेका छौ :
कसरी हेरिरहनु भएको छ इतिहासकै बलियो सरकारका काम कारवाही ?
अहिलेसम्म राम्रै छ । त्यस्तो चमत्कार पनि केही गरेको छैन । काम नगरेको भन्ने पनि होइन । नागरिक आशलाग्दा सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने, लापरवाही गर्ने ठेकेदारमाथि कारवाही गर्ने साहस सरकारले देखाएको छ । तर जे गर्नुपर्ने हो । जसरी गर्नुपर्ने हो । त्यो चाँही केही भएको छैन् ।
सरकारले के गर्नुपथ्र्यो ? कसरी काम कागर्नुपथ्र्यो त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो । स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत छ । पाँच बर्षको ज्ञारेन्टी समर्थन र साथ सहयोग छ । छिमेकी देश पनि सहयोग गर्न आतुर छन् । यस्तो बेला सरकारले चुनावको जस्तो विकासे गफ भन्दा प्राविधिक काम गर्नुपथ्र्यो । जस्तो खानेपानीको हाहाकार कति ठाउँमा छ ? भूकम्पपीडित तीन बर्षदेखि टहरामै छन् । टाढा नजाउ काठमाडौँकै धुवाँ धुलोको अवस्था कति डरलाग्दो छ । यस्ता सामान्य काममा पनि सरकारले गम्भिरतासँग काम गरेको छैन ।
तपाई भुगर्व विभागमा रहेर काम गर्नुभयो ? धातु विशेषज्ञ भएर विभिन्न अनुसन्धान पनि गर्नु भयो होला ? काठमाडौँमै पेटोलियम पदार्थको खानी छ भन्छन ? तर अहिलेसम्म उत्खनन् भएको छैन ? सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ?
हो । तपाईले भनेजस्तै हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन असिमित छ । काठमाडौँकै जमिनमुनि पर्याप्त खानी छन् । तर त्यसको उत्खनन हुन सकेको छैन । उत्खनन हुने वातावरण पनि छैन । सरकारले चुनावमा नेताले जस्तो गरी स्वदेशमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने भन्छ । तर कहिल्यै व्यवहारमा लागु गर्दैन ।
जलविद्यूतमा उस्तै सम्भावना छ । पर्यटनमा विश्वकै उत्कृष्ट देश हो । भौगोलिक संरचना र यसको विविधिकरण कुनै हिसाबले पनि कमजोर छैन । प्राकृतिक हिसाबले स्वर्ग भएको देश राजनीतिले गर्दा नर्क जस्तै भएको छ ।
खानीहरुको उत्खननमा अहिलेको सरकारले ध्यान दिएन भन्ने तपाईको गुनासो हो ?
हो । सरकारले जुन उद्धेश्य लिएर नागरिकलाई आश्वासन दिएको छ । त्यो अनुसार हाम्रै क्षमता र सम्पदालाई विश्वास गरेर यसको विकास गर्न जरुरी छ । हाम्रा देशका ७५ वटै जिल्लामा खानी छन् । हरेक जिल्लाका हरेक ठाउँमा कुनै न कुनै सम्भावना छन । अरु केही नभएपनि माटो छ । सरकारले कृषिमा ध्यान दियोस न कोही नेपाली विदेशिनु पर्ने बाध्यता हुदैन ।
मैले खानी उत्खनन्को कुरा मात्रै गरेको छैन । देशका आन्तरिक श्रोत, साधन, क्षमता सम्भावना छाडेर सरकार रेलकै पछाडी मात्रै लागेको छ । नेपालमा रेल गुडाउदैमा नागरिक खुशी, सन्तुष्टि र धनी बन्न सक्दैनन । अनि अहिलेको सरकारले भनेजस्तो रेल र पानी जहाज चल्दैमा समृद्धि पनि आउदैन ।
सरकारले भनेपनि नभनेपनि नागरिकले समृद्धि चाहेका छन । विकास चाहेका छन् । हिजोको नेपालभन्दा धेरै विकसित नेपाल बनाउन चाहेका छन । के चाँही गर्नुपर्ला त अब ?
सरकारले भाषण गर्न छाडेर काम गर्नुपर्छ । किनकी भाषण सुन्दै आएको धेरै भयो । अब काम गर्ने बेला आएको छ । यसका लागि सरकारले विज्ञलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुसँग योजना र विकासको ठोस खाका माग्नुपर्छ । छिमेकी देशको भ्रमणमा गएर भिख मागेजस्तो होइन । आफ्नो देशको विद्धानलाई राम्रोसँग चिन्न सक्नुपर्छ । अनिमात्रै देशको विकास हुन्छ । सरकारले ठुला भाषण छाडेर अब साच्चिकै काम गर्नुपर्छ ।
२०७५, २२ असार, 07:29:21 PM